Boqorka Sucuudigu waxa uu ku bixiyay $100 malyuun oo dollar fasixiisii xagaaga ee Morokko - Horn Future
Wargays British ayaa daaha ka fayday in boqorka qoyska Sucuudiga Salman bin Cabdul Caziz uu ($ 100 million) malyuun oo dollar ku bixiyay fasaxa xagaaga ee uu kusoo qaatay boqortooyada Morokko.
Wargeyska (The Independent) ayaa ku sheegay warbixin lagu faafiyay website-kiisa in lacagtan la sheegay ay u dhiganta 1.5% dakhliga waaxda dalxiiska kasoo gala shisheeyaha Morokko.
Waxa boqor Salman isla markii uu yimid gegeda diyaaradaha ee magaaladii Danja kusoo dhaweeyay raysall wasaaraha Morokko Sacdu-Diin Al-Cusmaani,ka hor intii aanan la gaynin qasrigiisa xagaaga ee dhawaan la furay,kaas oo laga dhisay goob qiyaas-dhuleedkoodu uu ka fadhiyo (74 hektaar) (ku dhowaad 300 oo kun oo mitir oo isku soo wareeg ah),sida ay sheegtay warbaahinta guduhu.
Waxa qasrigan dayactir balaadhan lagu sameeyay sannadkii 2016,iyada oo lagu daray dhismayaal, gego ay fadhiisato diyaaradda helikopter ku,iyo teendho weyn oo martigelinta loogu talogaly.
Sida laga soo xigtay wargayska (The Independent),oo soo xiganaya wargeyska Haaretz ee kasoo baxay guumeeysiga Isra’eel,waxa boqorkan Sucuudiga ku wehelinayay ambabixiisan in ka badan kun qof,iyada oo wasiirrada iyo taliyayaasha iyo qaraabada qoyskan loo xidhay huteelada ugu qaalisan ee raaxadda ee magaaladan kutaala Morokko .
Waxa laga soo dhaweeyaa Morokko booqashadan sababtoo ah waxaa loo arkaa mid abuurta dhaqaalaha gudaha, taas oo la filayo in ay ka dhalato dakhliga soo gala mid u dhigma 1.5% oo kamid ah dakhliyada kasoo gala dalxiiska shisheeye, sida uu sheegay wargaysku (Fangardia) ee laga leeyahay dalka Spain.
Dhiniciisa wargayska New York Times ee kasoo baxa Maraykanka ayaa xusay in 100 baabuur oo isku gu jira Mercedes iyo Range Rover madow,ay qayb ka ahayd codsiga boqorka iyo wafdigiisa inay weheliyaan inta ay dhex-wareegayaan magaalada Danja iyo agagaarkeega intii uu ku guda jiray booqashadii xagaagii hore ee lasoo dhaafay.
Qasriga balaadhan ee boqorkan Sucuudiga ayaa waxa uu ku yaalaa meel u dhow degmada Ras Sabaardiil ee ku taal xeebta Danja,waxana uu leeyahay maqaaxiyo raaxo leh iyo xarumo caafimaad.
Waxa wargeyska The Independent uu sheegay in boqor Salman uu ku leeyahay dhismayaal waa weyn meelo kale oo dunida kamid ah oo ay ku jiraan aqalo badan oo kuyaala magaaladda Paris iyo qasri kuyaala xeebta Côte-d’Azur ee France iyo qasri kuyaala jasiiradda Marbella ee kutaala dalka Spain.
Si kastaba ha ahaatee,waxa hantida xad-dhaafka ee qoyskani u adeegsanayo fasaxyadooda xagaaga ee dunida ay kusoo beegmaysa xilli 30% dadka ku nool dhulka Barakaysan ay ku sugan yihiin shaqo la’aan,marka lagu daro in qaybo badan oo kamid ah bulshada ay seegan yihiin inay awoodaan helitaanka aqalo wanaagsan oo ay ku noolaan karaan.
Dhinaca kale waxa arrintan ay kusoo beegmaysaa sido kale xilli bulshada Yemen ay isku gu biirtay gaajo iyo shuban-biyood galaaftay kumanaan qof oo rayid ah,sababo la xidhiidha duqeeymaha cirka ah ee qoysakni ku hayo iyo go’doominta iyo dagaalada macno darrada ah ee ay horseedeen argagixisada shiicada xuutiyiinta ee tirada yar iyo kaligii-taliyihii hore.
Dhanka kale xubnaha qoyskan Sucuudiga ayaa hantida Muslimiinta ee ay ku tagrifalayaan ku maal-galiya televishano aad u tiro badan oo ku faafiya dhaqan-xumada dunida Carabta kuwaas oo cabashooyin tiro badan laga soo jeediyay,marka lagu daro hantida ay ku khasaariyaan sida dharaga iyo kibirku jiro dalalka reer Galbeedka ee aanan la tiro koobi karin badideeda.
Hantida qoyskani sida foosha xun ugu tagrifalayo ee aanan ahayn maan-galka ma’aha mid samada uga soo degtay iyo mid uu ka dhaxlay odaygii ay ka tafiirmeen,balse waa hanti ka dhaxeeysa dunida Islaamka oo ku dhacday gacan khaldan,waxana qoyskani noqday masiibo dunida Islaamka u horseeday hagardaamo iyo lugooyo.
« Imaaraadka Carabta oo joojisay taageerada Air Berlin markii Germany diiday go’doominta Qadar	» US-led strikes kill 78 civilians in Syria’s Raqqah